Soosaaraha iyo Warshada ugu Fiican Taxanaha HLF Fine |HongCheng
Qalabka wax-shiidka ee taxanaha ah ee HLF waa alaabtii ugu dambeysay ee ku tiirsanaanta ay soo saartay HCM iyadoo ku sawiraysa tignoolajiyada kala soocida ugu horumarsan adduunka.Qalabka wax lagu shido ee isticmaalaya habka falanqaynta aerodynamics aviation, tignoolajiyada kala firdhinta hakinta, tignoolajiyada kala soocida toosan ee hadda jirta, tignoolajiyada ururinta kala soocida duufaanka rotor, qalabka wax-shiidka ayaa isticmaala tignoolajiyada kala soocida sare ee budada ah iyo tignoolajiyada kala soocida boodhka dhaafin, taas oo ka dhigaysa kala soocideeda hufnaanta oo aad u sareysa, nadiifinta budada ganaaxa oo sareysa, hufnaanta tamarta cajiibka ah, iyo awoodda nidaamka wax-shiidka si muuqata ayaa loo hagaajiyay.Wanaajinta budada si fudud ayaa loo hagaajin karaa inta u dhaxaysa 200 ~ 500 mesh.HLF taxane ah oo kala soocida hawada ku haboon cutubyada wax soo saarka ee sibidhka, desulfurized calcium ku salaysan budo, dhulka horumarsan, ore titanium, budo micro, samaynta qoto dheer lime, kalsiyum hydroxide, calcium oxide carbonate iyo duuli unugyada wax soo saarka ash.Hagaajinta korsashada ayaa lagu sameeyay kala-soocida miraha si loo daboolo dabeecadda cuf-jiidka gaarka ah ee iftiinka iyo viscosity sare ee calcium hydroxide.Haddii aad raadinayso kala-soocida hawada shiinaha la isku halayn karo oo kharash-ool ah, fadlan nala soo xidhiidh hoos!
Farsamaynta Kala-firdhinta iyo Kala-saarista Lalaalay
Saamaynta fidinta wanaagsan.Alaabta waa la jejebiyey oo lagu kala soocaa qashin-qubka ka dibna geli goobta xulashada budada.
Tignoolajiyada ururinta wareegga gudaha
HLF taxane qalabka wax lagu shubo waxay isticmaashaa kalasaarayaasha iska caabinta hooseeya ee waxtarka sare leh iyo kanaalo badan oo lagu qaybiyay qaybaha ugu muhiimsan ee kala-soocida, taas oo si wax ku ool ah u fududaysa habka nidaamka, yaraynaysaa culeyska iyo shuruudaha soo-ururinta boodhka, waxayna yaraynaysaa mid ka mid ah. Maalgelinta waqtiga iyo awoodda lagu rakibay ee nidaamka.
Farsamada kala-soocidda hawada sare ee budada qallafsan
Ku rakib qalabka kala-soocidda hawada sare ee budada qalafsan ee qaybta hoose ee budada qallafsan ee dambaska ee kala-soocida, si aad u nadiifisid budada aan dhab ahayn ee ku dhacaysa dambaska mar labaad, si budada ganaaxa ee ku dheggan budada aan dhab ahayn waa loo soocay si loo helo waxtarka xulashada budada sare.
Tignoolajiyada wax-ku-oolka ah ee u adkaysta xidhashada iyo tamarta-badbaadinta
Waxtarka xulashada budada ee HLF taxane mill classifier waa ilaa 90%, dhammaan qaybaha xidhashada waxay ka samaysan yihiin qalab u adkaysta xidhashada iyo daawaynta ka-hortagga xidhashada, adeegga nolosha dheer iyo kharashyada dayactirka oo hooseeya.Qalabka wax hagaajinaya ee rotor-ka waxa ku jira qalab wax hagaajinaya oo hadda jira, kaas oo si wax ku ool ah u yareeya luminta awoodda iyo xidhashada.
Horizontal Eddy Tignoolajiyada Kala Saarida Hadda
Xulashada budada socodka hawada waxay ka gashaa aagga quudinta budada iyada oo u sii marinaysa daabyada rotor si toosan iyo si toos ah si ay u sameeyaan socodka hawo wareega wareega ee xasiloon oo isku mid ah.Meesha xulashada budada vortex-ka toosan waxay gaari kartaa kala saarid sax ah.
Kala soocida Hawlgalka Wax soo saarka
Gasha wiishka bakhaarka alaabada dhammaatay - gudbiyaha alaabta dhammaatay- garaaca dabaylka dabaylka hoose ee waalka wareega - kala saara - marawaxada - marawaxada garaaca wadnaha
Jooji nidaamka dharbaaxada - wiishka - shaashadda trommel - marawaxada garaaca dabaysha hadhaaga - kala saarta - marawaxad - garaaca garaaca garaaca wadnaha hoose - gudbiyaha alaabta dhammaatay - geli wiish alaabta dhammaatay - kontoroolka garaaca wadnaha
Hawlgalka iyo Dayactirka
Si loo hubiyo kala soocida inuu si hufan oo badbaado leh u shaqeeyo muddo dheer, dayactirka maalinlaha ah waa lagama maarmaan.Isticmaaluhu waa inuu dejiyaa nidaamyada hawlgalka iyo dayactirka iyo nidaamyada dayactirka si waafaqsan xaaladaha dhabta ah ee warshadda.
(1) Si joogto ah ugu dar saliid saliidayn ku filan marawaxadaha iyo xadhkaha kala soocida.Ugu yaraan ku dar 2 jeer xajmiyada kala-soocida halkii shifti (8 saacadood), iyo cadadka saliiddu waa inaanu ka yarayn 250 garaam halkii shifti.
(2) Heerkulka xajmi kasta waa in lagu xakameeyaa in ka badan 60 ℃.(140℉)
(3) Fiiro gaar ah u yeelo dheelitirnaanta kala soocida.Jooji oo hubi haddii uu jiro gariir aan caadi ahayn.
(4) Hubi in dabayl kasta oo dubbe culus uu yahay mid xasaasi ah oo leh saamayn dabaysha oo wanaagsan.Hagaajin mugga hawada hadhaaga marawaxada garaaca dabaysha iyadoo loo eegayo saamiga biyaha ee kaalshiyamka hydroxide ee sii lumaya, ka fogow nidaamka uumiga biyaha inuu qarqiyo, iska ilaali budada kalsiyum hydroxide in lagu xidho rotor ama dhuumaha.
(5) Isku day inaadan ku hagaajin albaabka hawo-qaadista ee marawaxada si ay u fiicnaato kalsiyum hydroxide, isku day inaad hagaajiso xawaaraha shafka weyn.
Taxadirrada Isticmaalka Kala Soocida Qalabka Milling Taxanaha HLF
(1) hagaajinta ganaaxa guud ahaan waxay isticmaashaa hagaajinta xawaaraha rotor-ka, iskuna day inaadan u isticmaalin hagaajinta mugga hawada intii suurtogal ah.
(2) Nidaamku waa inuu si fiican u xiraa, gaar ahaan budada ganaaxa iyo meelaha budada ah, iyo qalabka qufulka hawada waa in lagu rakibaa.
(3) Kalasaaruhu wuxuu leeyahay hufnaan sare iyo culeys wareeg hooseeya.
(4) Xoojinta maamulka hawlgalka.
Warshadda Rinjiga Rinjiga Burada Ka Soo Qaada Shiineeska Ultra Fine Mill Qiimaha Mashiinnada Milling Dhaqdhaqaaqa Fiican ee Ultra Batroolka Coke Roller Mill Furimaha Dagaalka